I-China i-BHS yeBhodi yeeNgcaciso zeeBhodi eziTyhidiweyo kunye nabathengisi | Xinhua
BHS rhanga-Iibhodi Slitting Iimela
Tungsten khabhayithi rhanga-Paper uqhoqhoqho Knife
It ikakhulu zixinaniswe izixhobo incence ukusika iphepha, kunye nephepha incence usikwe ngumgaqo uqhoqhoqho.
Iphepha lesamente elijikeleze iimela ezenziwe nge-tungsten carbide kunye ne-cobalt powder metallurgy inobunzima obuphezulu kwaye inxiba ukuxhathisa, kwaye kwangaxeshanye inokumelana nobushushu kunye nokumelana, ukuze iimela zisetyenziswe kakhulu ekusikeni ikhadibhodi ebunjiweyo.
Ngokuhlengahlengisa umlinganiso we-tungsten carbide kunye ne-cobalt kunye nobukhulu be-tungsten carbide powder, sifumana i-carbides yesamente eneepropathi ezahlukeneyo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi abahlukeneyo.
Inkampani yethu ineminyaka engaphezulu kwama-20 yembali yemveliso ye-tungsten carbide slitting knives, egxile kwimveliso ye-tungsten carbide eprintiweyo yamaphepha ajikelezayo kunye neemela ezahlukeneyo zokwenza i-carbide.
Ngaphezu kwesiqingatha seemveliso zithunyelwa ngaphandle eYurophu, eUnited States nakwamanye amazwe aphuhlileyo nakwimimandla. Ukusebenza Product ihlangabezana ngokupheleleyo neemfuno engqongqo ezahlukeneyo high-speed izixhobo uqhoqhoqho. Umgangatho wemveliso ukwindawo ekhokelayo kumacandelo ezinto zorhwebo lwasekhaya nakwamanye amazwe.
Injongo yenkampani yethu kukuba ngowona mgangatho uphezulu, olona mgangatho uphezulu, kunye nomthengisi omkhulu weemela zentsimbi ye-tungsten.
IBakala Ubungakanani beBewu Ukuxinana Ubunzima I-TRS (N / mm²) Ifanelekile ukusika
ZT20U Intlawulo encinci 14.35-14.5 91.4-91.8 3200 Ibhodi edityanisiweyo, ifayibha yemichiza, iiplastiki, isikhumba
ZT26U Intlawulo encinci 14-14.1 90.4-90.8 3500 Ibhodi rhanga-, iziqwenga pole pole
ZT30U Intlawulo encinci 13.85-14 89.7-90.2 3200 Iphepha lebhodi
Izinto No I-OD (mm) I-ID (mm) T (mm) Imingxunya (mm) Iyafumaneka kumatshini
1 230 110 1.1 *9 * 6holes FOSBER
2 230 135 1.1 4 kwiindawo zokubeka eziphambili FOSBER
3 220 115 1 *9 * 3holes Amagama amaninzi aqhelekileyo kunye aqhelekanga ngegama Agniati
5 240 115 1 *9 * 3holes Amagama amaninzi aqhelekileyo kunye aqhelekanga ngegama Agniati
6 250 150 0.8 UPETROS
8 260 112 1.5 *11 * 6holes UORANDA
10 260 168.3 1.2 .510.5 * 8holes UMTSHATO
14 280 160 1 7.5 * 6holes IMITSUBISHI
15 280 202 1.4 *8 * 6holes IMITSUBISHI
Iimela zokusika iibhodi ezitshixwayo koomatshini baseTshayina
Izinto No I-OD (mm) I-ID (mm) T (mm) Imingxunya
I-FAQ yeengxaki zobugcisa
Uhlalutyo lweengxaki eziqhelekileyo zebhodi yamacangci
(Hayi: zonke iingxaki esixoxe ngazo ngeemela ezifanelekileyo)
Q1 Kutheni ixesha elifutshane lokusebenza ebomini bebhodi ecekeceke ukusika iimela?
A: Ngaba ubungakanani bokudla okuziinkozo kwevili lokusila kufanelekile?
Ubungakanani obuninzi bokutya okuziinkozo kwevili lokusila benza ixesha elifutshane lokusebenza kobomi beemela
I-Q2 Kutheni imiphetho yeebhodi ezinamazinki zisikwe ziimela nge-burr kunye nesifotho?
A: Nceda ujonge isiko lokusika iimela zakho, ngaba umda wokusika unomdla ngokwaneleyo? Okanye ukuba ibhodi enamanzi imanzi kakhulu?
Q3 Iimela ezaphukileyo
A: Indibano engachanekanga (umz. Ipleyiti esonakeleyo esisangqa; ukujija okungafanelekanga) kuya kubangela ukuqhekeka ngokukhawuleza kweebhleyidi, nakuphi na ukubamba okungafanelekanga kwezi blade kuthintelwe ngokungqongqo ngexesha lokusebenza,
Iivili ezingashukumiyo zokuguba ezophula iimela, nceda ujonge ukuthwala kwamavili okusila.
Ukuchukumisa okungafanelekanga okanye ukubetha ngezinye izinto ezinzima.
Ukungqubana ngengozi kweemela
I-Q4 Chips kumda wokusika emva kokuguba.
A: Iivili zokuguba ezingazinzanga ezinokubangela le ngxaki, nokuba ziqhekeze iimela, Isitrayikhi sezinto ezinzima sinokubangela ukuba iichips zisemacaleni nazo.
I-Q5 Kutheni udini lwebhodi edityanisiweyo ingalunganga?
A: Amandla angenakuthelekiswa nanto eemela kwibhodi enamanani anoxinano oluphezulu.
I-FAQ malunga nokuthengisa kwangaphambili kunye nasemva kwentengiso
Q: Ngaba nawe unikeze izibambo zentsimbi?
Ewe sinabaphathi ababambiseneyo abathe basebenzisana iminyaka emininzi, kwaye banokukunika izibambo zokurhabaxa ezikumgangatho ophezulu, ngexabiso eliphantsi.
Egqithileyo Marquip khabhayithi ISetyhula rhanga-slitting Iimela
Okulandelayo: Mitsubishi rhanga-khabhayithi khabhayi iimela
Iibhs zokuThintela iiKhadi
Zekhabhayithi rhanga-slitting Iimela
Carbide uqhoqhoqho iimela
Yenyuka iCarton Slitting Iimela
Iibhokisi zeFosber zeBhodi eziTyhidiweyo
Marquip khabhayithi ISetyhula rhanga-uqhoqhoqho ...
Agnati khabhayithi ISetyhula rhanga-uqhoqhoqho ...
Mitsubishi rhanga-khabhayithi khabhayi iimela